Topnepalnews.com | फोटो खिचेपछि कहाँ थन्किए शीर्ष नेताका सरकारी साइकल ?
फोटो खिचेपछि कहाँ थन्किए शीर्ष नेताका सरकारी साइकल ?
Posted on: May 02, 2016 | views: 164
काठमाडौं । यतिबेला सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु शीर्ष नेताहरुले साइकल चढेको तस्बिरले रंगिएका छन् । कतिपयले सकरात्मकरुपमा लिएपनि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने ‘नाटक’ गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । कतिपयले यसलाई ‘सस्तो लोकप्रियता’ को संज्ञा समेत दिइरहेका छन् ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको साइकलमा शीर्ष नेताका विभिन्न ‘पोज–पोज’का तस्बिर सार्वजनिक भएपछि विभिन्न धारणा सार्वजनिक भए । भारतीय नाकाबन्दी र इन्धन संकटलाई न्युनिकरण गर्न भन्दै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ‘माउन्टेन बाईक’ दिइएको थियो ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले प्रधानमन्त्री ओली निवास बालुवाटार, प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट र कोइराला निवास महाराजगञ्जमै पुगेर साइकल हस्तान्तरण गरेका थिए ।
वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले वातावरणमैत्री बनाउने भन्दै मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि १० वटा माउन्टेन बाइक खरिद गरेको थियो । टेन्डर आह्वानबिना नै खरिद गरिएको उक्त साइकलकोप्रति गोटा ५० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने जनाइएको छ । वातावरण मन्त्री र उनका सुरक्षागार्डसहित ३ वटा साइकल प्रयोगमा आएका छन् । त्यस्तै १० मध्ये ३ वटा साइकल शीर्ष नेताहरुलाई वितरण गरिएको थियो । वितरित साइकलबारे कतिपयले ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ को आरोपसमेत लगाइरहेका छन् ।
नेताहरुले पनि तस्बिर खिचाउनको लागि मात्रै क्वाटरको कम्पाउण्डभित्रै साइकल चढिदिएपछि चौतर्फी आलोचना नै भयो । सरकारले दिएको उक्त साइकललाई शीर्ष नेताहरुले कसरी सदुपयोग गरेका छन् ? स्वकिय सचिवालयका अनुसार कुनै पनि नेताले उक्त साइकल प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको साइकल क्वाटरको अँधेरो कुनामा थन्कियो
प्रधानमन्त्रीका केपी ओलीका लागि वितरण गरिएको साइकल उनी निवासको एक कुनामा थन्क्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव रमेश आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले केही समयपछि त्यसलाई प्रयोजनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘त्यो साइकल बालुवाटार मै छ । उहाँ अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसलाई नियमित तरिकाले प्रयोगमा ल्याउने उहाँको सोच छ,’ आचार्यले साझापोस्टसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री सबै जनतालाई वातावारण मैत्री बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ।’
प्रचण्डले चलाउनै भ्याएनन्
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले साइकल चलाउन भ्याएका छैनन् । वातावरण मन्त्रालयबाट पहिलोपटक साइकल बुझेका उनको साइकल पनि थन्क्याइएको छ । उनी साइकल चलाउन निकै मन पराउने व्यक्ति रहेको समेत स्वकिय सचिव जोखबहादुर महराले जानकारी दिए । भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा चर्को स्वरमा साइकल चढेर प्रतिवाद गर्ने भाषण गरेपछि प्रचण्डले साइकल भने कम्पाउन्डभित्र मात्रै चढे ।
‘यो साइकल अहिले निवासमै राखिएको छ । उहाँलाई साइकल चलाउने राम्रो ज्ञान पनि छ । फुर्सदमा चलाउने योजनामा हुनुहुन्छ,’ महराले साझापोस्टसँग भने, ‘वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रतिकात्मक रुपमा भएपनि चढ्नुपर्छ हामी यो विषयमा छलफलमा छौं ।’
कोइरालाको साइकलको हालत यस्तो
तीन नेतामध्ये सबैभन्दा पाको सुशील कोइरालालाई पनि वातावरण मन्त्रालयले साइकल दिएको थियो । कोइरालाको साइकल थन्क्याएर रााखिएको छ । उनका स्वकिय सचिव अतुल कोइरालालाई साइकल सम्बन्धी प्रश्न गर्दा ‘किन चाहियो ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । ‘निवासमा थन्क्याइएको छ । अहिले हामी पोखरामा छौं,’ कहिलेबाट साइकल चढ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘फुर्सद पाउनु पर्यो नी ?’